Ciyaaraha Da'yarta Olombikada Adduunka oo ka furmay dalka Argentina iyo Soomaliya oo kamid ah 206 dal oo tartanka ka qayb galaya+Sawirro
Monday, May 20th, 2019 - 13:54:05
Sunday October 07, 2018 - 10:32:35 in Wararka by Hussein Hadafow
Axad- Beunos Aires
Waxaa shalay si rasmi ahmagaalada Beunos Aires si rasmi ah uga furmay ciyaaraha saddaxaad ee da’yarta Olombikada Adduunka, waxaana ka qayb galaya206 oo caalamka oo ay dalkeena Soomaaliya ka mid tahay.
Tartanka oo ay ka qayb galayaan ku dhawaad 4,000 oo ciyaaryahan oo ku tartamada 401 qayb oo 32 dhacdo oo isboortiga kamid ah waxaana dalkeena calanka u sida Cabdirashiid Yuusuf Cali iyo Jiijo Xasan Maxamed oo ku tartami doona ciyaaraha Fududqaybtiisa orodka.
Xaflada si heer sare loosoo agaasimay isla markaana ay ka qayb qaateen in kbadan 2,000 oo qof oo farshaxano cajiib ah oo ay dadwaynahaku sgunaa aad ula dhaceen.
Ciyaartoyda qaranka Soomaaliyeed ee tartanka ka qayb galaysaciyaaryahanada uu Guddiga Olombikada Soomaaliyeed sanadihi lasoo dhaafay u diyaarinayay tartankan iyo kan Olombikada Adduunka 2020 ka dhici doona dalka Magaalada Tokyo ee dalka Japan.
Tartankan oo si rasmi ah u furmay shalay oo ay taariikhda ahayd 6-da Oktoobar ayaa lasoo gebogabayn doonaa 18 Oktoobar.